Home SOUTH AMERICA FOOTBALL CORRADA Ciyaartoyda Kubadda Cagta ee Argentine Marcos Rojo Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir la'aanta
LB wuxuu soo bandhigayaa Sheekada Full of Defensive Genius ugu caansan ee loo yaqaan Nickname; "Becho". Dabeecadeena Marcos Rojo Childhood iyo Xogta Aan Laheyn Xaqiiqooyinka ayaa kuu keenaya xisaab buuxa oo ka mid ah dhacdooyinka la arki karo wakhtiga carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqayntu waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor warkeeda, nolosha qoyska iyo Off-Pitch Marcos Rojo Xaqiiqooyin
Haa, qof kastaa wuu ogyahay awoodiisa difaaciisa, laakiin wax yar ayaa tixgeliyey bosigeena Marcos Rojo kaasoo ah mid xiiso leh. Hadda oo aan adieu kale, aan bilaabi.
Marcos Rojo Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xaqiiqooyinka looyaqaano -Nolosha Hore
[Magaca Dheer] Faustino Marcos Alberto Rojo wuxuu ku dhashay 20th March ee 1990 ee La Plata, Argentina. Wuxuu ku dhashay Carina Rojo hooyadiis iyo Marcos Rojo Snr aabihii. Wuxuu ku koray El Triunfo ee La Plata, oo ah magaalo sabool ah 40 mayl Buenos Aires (Capital of Argentina). Waa magaalo loo yaqaano burcad-badeedda caanka ah iyo dadka kubada cagta jecel.
Isagoo dalbaday in uu ka dhigo inuu xirfadiisa ciyaareed ku bilaabo aagga La Plata ee La Plata, Marcos 'waalidiintiisa ayaa u qaaday Estudiantes LP halkaas oo uu ku diiwaangashan yahay dhalinyaro kubadda cagta markii uu da' ahaan jirey 4. Hoos waxaa ku yaal sawirka cajiibka ah ee daafaca uu qaatay tallaabadiisa ugu horeysa ee ciyaarta quruxda badan sida cunug.
Maadaama Marcos Rojo uu soo dhigay, ... "Waqtigaas oo aan bilaabay kubbadda cagta, aabahayga ma lahan baabuur. Waxa uu ahaa mid sabool ah, tababaradayduna ma ahan mid aad ugu dhow guriga. Sidaas awgeed waa inaanu raacnaa baaskiil. Labadayada baaskiil ayaan waday wakhti dheer. Aabahayga ayaa isticmaalay waxyaabo uu ku iibinayay waddada waana uu ku soo laaban lahaa si uu iigu soo qaado gurigiisa safarka. Waxay ahayd safar dheer oo aan ku helayo diirran quruxda markii uu baaskiil ku wado! " Rojo waa inuu ku soo boodaa tababarka, safar wareeg ah oo ku saabsan agagaarka 20 ee gurigiisa ilaa meeshiisa tababarka. Waxa uu sameeyay dhowr fuushooyin si uu u xaqiijiyo inuu ku riyoodo inuu noqdo ciyaaryahan xirfadle ah.
"Waan arki karay jaceylkiisa," ayuu yidhi Rojo Snr (aabbihiis). "Waan arki karay, waxaana isku arki jiray isaga, sababtoo ah wuxuu kubad walba raaci lahaa. Mar walba wuu ka duwanaa wiilasha kale ee da'diisa. " Tababaraha dhalinyarada ee kooxda Estudiantes Gabriel San Millan ayaa sidoo kale aqoonsaday awoodda Marcos waxaana uu gacan ka geystay inuu horumariyo tayadiisa kooxdiisa kooxdiisii ​​hore. "Farsamo ahaan, wuxuu ahaa ciyaaryahan wanaagsan" ayuu yiri San Millan. Wuxuu sii waday ..."Wuxuu lahaa xirfado fiican iyo saldhig wanaagsan. Laakiin waxa had iyo jeer ka soo jeeday isaga ku saabsan waxay ahayd rabitaankii had iyo jeer ka fiican. Marcos Alonso ayaa aheyd ciyaaryahan cajiib ah. Markii uu ahaa 18 ama 19, wuxuu bilaabay inuu horumar sameeyo jir ahaan.
Dhamaadkii sanadka dhalashadiisa, Marcos wuxuu horay u ciyaaray kooxda maxaliga ah, Estudiantes, kuwaasoo ku jira qeybta hore ee Argentine. Sanadihii dhalinyarada ahaa ee Marcos ayaa la tacaalayay dagaalka waxaana uu dugsiga ka joojiyey xilli hore. Waxaa jira waxyaabo badan oo dhaca, dagaal iyo xitaa dhimasho. Cagta wuxuu ahaa badbaadiye. Mar walba wuxuu ciyaaray kubada cagta tan iyo markii uu yaraa. Mar walba kubadda cagta, maalin iyo habeenba. Marar badan, marar badan Marcos ayaa ku biiri lahaa dagaal. Wuxuu aad u xanaaqaa wuxuuna leeyahay khilaafyo badan. Waa caadada jidadkaas. Waa inaad noqotaa mid xoog leh.
Ka dib markii uu ku guuleystay Copa Libertadores sanadihii dambe, Marcos wuxuu u dhaqaaqay Spartak Moscow ka dibna Sporting Lisbon. Xaqiiqdii wuxuu ka dhigay xulkiisa finalka Koobka Adduunka 2014 ee Brazil, iyadoo Argentina ay u gudubtay finalka ka hor inta aan la dhicin Germany. Tani waxay keentay wicitaan Man United. Inta kale, sida ay yiraahdaan, hadda waa taariikh.
Marcos Rojo Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xaqiiqooyinka looyaqaano -Nolosha Xiriirka
Rojo wuxuu guursaday Eugenia Lusardo, oo ah qaabka lingerie oo ku salaysan Lisbon. Labadaba jacaylka ayaa la kulmay oo ku dhacay jacayl kale markii Rojo uu joogay Sporting CP. Eugenia sidaasi oo kale waxay ka shaqeynaysay shirkadda Lisbon-da ee xarunteeda lagu magacaabo Dama de Copas. Runtii waa gabadh qurux badan.
Lamaanayaashu waxay leeyihiin gabadh la yidhaahdo Morena (kuwaas oo ay jecel yihiin 'More').
Noloshii Rojo ee la saaxiibtey Eugenia Lusardo waa adduunka oo dhan oo ka soo horjeeda tageerada adag ee reer Argentine ee barriga liita.
Maqnaanshaha: Bishii Diseembar 2014, Rojo wuxuu la shaqeeyay haweeney uu la kulmay goob lagu caweeyo. Wuxuu ku eedeeyay naceybka iyo in uu joojiyay wargeyska si uu u joojiyo joornaalada ku daabacaya magaciisa sheekada. Cadaadiskii magiciisa ayaa la qaaday bishii April 2015 sababo la xiriira welwel laga qabo in ciyaartoyda kale ay ka shakisan yihiin inay xiriir la leeyihiin, lakiin waxa ay ku jirtaa inay ka hortagto sii deynta sawirada Rojo.
Marcos Rojo Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xaqiiqooyinka looyaqaano -Nolosha Qoyska
Kubadda cagtu waxa ay badbaadisay Marcos noloshiisa oo ku taal waddooyinka adag ee El Triunfo waxayna kor u qaadeen qoyskiisa saboolnimada. Hoos waxaa ku yaal sawirka Marcos iyo Hooyadiisa, Carlina oo ka faa'iideysanaya hantidiisa iyo guulihiisa.
Marcos Rojo Snr, oo lagu magacaabo 'Titi', ayaa ahaa ciyaaryahankii hore ee kubadda gacanta ee El Cruce waxaana uu ka caawiyay inuu wiilkiisa ku riixo da 'yar yar. Aabihiis wuxuu samaystay kaliya 2.50 maalintiiba oo ah iibiyaha iibiyaha koonfureed, kaas oo lahaa inuu ku filnaado inuu ku quudiyo Marcos iyo afar caruur ah - Franco, iyo saddex gabdhood - Noelia, Micaela, iyo Sol. Hoos waxaa ku yaal sawirka Marcos iyo sadex ka mid ah walaalihiis inta lagu jiro maalmaha carruurtooda.
Marcos Rojo iyo sumcaddiisa ayaa ka tagay qoyskiisii ​​oo dib ugu noolaa iyagoo cabsanaya in la dilay. Dembiilayaasha Argentina ayaa horeyba garaaceen aabihiis, kadibna rasaasto ku riday hooyadiis madaxa. Hal xubin oo qawlaysatada qaaska ah oo gurigiisa ku jiray ayaa ku hanjabay inuu dilo walaashiis sagaal jir ah oo lagu magacaabo Sol iyo Godson, oo ah da'da hal sano.
Waxay rajeynayaan in ay gacmahooda ku helaan malaayiin kiilo ah oo uu marar badan ku soo celiyo dadka uu jecel yahay. Tani waxay timid markii dakhligiisa guud ee la helay ay nasiib u siisay nadiifiyaha Old Trafford. Marcos walaalkiis Franco iyo walaasha Noelia ayaa si geesinimo leh uga hadlay cabsida qoyska taasoo ah dhibaneyaal badan oo ah Marcos guusha garoonka
Wareysi gaar ah oo uu la yeeshay The Sun, waxay u sheegeen sida tan iyo markii uu ku biiray Man Utd bishii August, qoysku waxay joojiyeen inay ka jawaabaan albaabkooda ayna kor u qaadaan ammaanka. Isagoo ka hadlaya gurigeeda La Plata, Noelia wuxuu yiri: "Mar walba waan ka baqaynaa. Waxay nala bartilmaameedsadeen Marcos. Way ogyihiin guriga, qof walba waa ogyahay. Waa inaan qaadnaa taxadar kasta oo anaga
Ha ka jawaabin albaabka qofna. Waxaan u baahannahay inaan saarno daaqadaha daaqadaha oo dhan - hore, gadaasha iyo albaabada kore. Waxay halis u tahay qoyska Marcos Rojo. Laakiin ma tagi doono sababtoo ah tani waa gurigeena. " Waxay ahayd mid aad u dhib badan weerarkii burcadda ee hooyadeed iyo aabaha gurigeeda oo ay ku soo daabacday sheeko ku saabsan xisaabteeda Twitter-ka oo muujinaysa ka dib markii ay ka dambeysay dilka naxdinta leh. Dhanka kale, Marcos aad u naxdin leh ayaa dalbaday in bilaysku raadsadaan kuwa culus - iyaga
marnaba ma aysan sameyn - oo wuxuu Twitter u soo diray in uu ka horjoogsado weeraryahannada.
Xitaa markii uu qoyskiisa ka guuray gurigooda, weli waxay ku jireen dhibane kale
oo ah qorshe cusub oo kaash ah. Waa arrin ku xiran tahay in markii Marcos uu United ku biiray xagaagii, heshiiska ayaa la qabtay sababtoo ah arrimo ku saabsan ruqsadaha shaqo ee sababay eedeymo ku saabsan weerarkii ka dhacay tuuladiisa.
Marcos Rojo Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xaqiiqooyinka looyaqaano - Maareynta Xaaladaha Xaaladaha
Franco walaalkiis ayaa yiri: "Wuxuu had iyo jeer doonayay inuu noqdo Veron, waxaana uu isku dayi doonaa inuu noqdo marka uu kubada ku ciyaaro guriga. Marcos badanaa wuxuu ku fadhiyaa qol qaas ah maalmo isaga oo kale ah haddii kooxdiisu ay ka adkaatay kulan muhim ah. Ka dib markii Argentina laga adkaaday Germany finalkii Koobka Adduunka 2014, Marcos ma uusan hadli karin ama cidna u arki karin ugu yaraan hal usbuuc. Wuu buuqi karaa maalmo badan. Wuxuu joogaa caro. Waqtigaan, wuxuu u baahan yahay in keligiis laga tago kadibna uu dib ugu soo noqdo. Ka dib Koobkii Adduunka, waxay ku qaadatay shan maalmood. Wuxuu telefoonkiisa u leexiyaa oo uusan cidna la hadlin. Laakiin ma aysan aheyn Manchester United. "
Marcos Rojo Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xaqiiqooyinka looyaqaano - Khilaafka
Marcos mar uu sababay muran ka dib markii uu soo sawiray muuqaal ah mukhaadaraadka mukhaadaraadka Pablo Escobar boggiisa Instagram isaga oo leh erayada: "Kaliya kuwa i gaajooday aniga iyo aniga oo istaagay markii aan wakhti xun ku dhexmaray meel aan nolosheeda ku cuno waxay cuni doontaa miiskayga."
Marcos, markii uu la kulmay, ayaa sheegay in boostada aysan aheyn wax weyn oo lagu daray: "Sawirka ayaan galinayaa sababtoo ah waan jeclaa hadalka iyo ereyada." Peharbs, he ayaa loo arkaa sheekada nolosha Escobar ee TV-ga waxayna jeceshahay weedhaha. Macnaheedu maahan. Dhab ahaantii, wuxuu taageeraa waxa uu sameeyay. Si kastaba ha ahaatee, inkastoo uu ku guuleystay, Marcos ma iloobin xididadiisa oo wuxuu hubiyaa in dhamaan qoyskiisa uu ka faa'iideystay guusha.
Taasi ma dhicin haddii uu raacay dareenkiisa kale ee nolosha 'hees'. Marcos wuxuu doonayay inuu noqdo fanaan haddii uusan noqon karin ciyaaryahan. Xaqiiqdii, wuxuu heesaa oo qoob-ka-cayaaraa dhammaan dhinacyada, dhammaan dhacdooyinka qoyska.
Marcos Rojo Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xaqiiqooyinka looyaqaano -Naftaada Shaqsiga
Marcos Rojo wuxuu leeyahay astaamaha soo socda ee shakhsiyadiisa.
Xoogagga Marcos Rojo: Waxa uu yahay naxariis, farshaxan, macquul, isfaham, caqli badan oo fanka ah (Tartankii ugu horeeyay ee kubada cagta).
Marcos Rojo Tabar-darrada: Awood la'aanta maareynta khasaaraha.
Maxaa Marcos Rojo uu jecelyahay: Kaligaa, hurdo, muusik, jacayl, warbaahin muuqaal ah iyo dabaasha.
Maxay Marcos Rojo Jeceshahay: Dhexdhexaadinta, oo lagu dhaleeceeyay, horey u soo noqdeen si ay ula yaabaan isaga iyo naxariistiisa nooc kasta.
Marcos waa mid aad u saaxiibtinimo, sidaa darteed waxay inta badan naftooda ka helaan shirkad dad kala duwan. Isagu sidoo kale waa mid aan kalsooni lahayn oo had iyo goor diyaar u ah inuu caawiyo dadka kale, isagoo aan rajeyneynin inuu dib u helo.
Marcos Rojo Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xaqiiqooyinka looyaqaano -Cunitaanka Banana
Marcos Rojo ayaa ka mid ahaa wadahadaladii ugu muhimsanaa ee ka mid ah Manchester United ee Europa League oo uu la ciyaaray Rostov - isagoo cunaya muuska garoonka.
Waxay ahayd Jose Mourinhokooxdii ku guuleysatay tartanka quarter-finals tartanka 2-1 wadajir ahaan ugu mahadcelisay Juan Mata qeybtii labaad ee tartanka. Labada kooxood ee taageerayaasha ah ayaa la qarsoomay markii Ashley Young la arkay Rojo oo ah muusig la fiiqay si uu u cuno halka uu ku ciyaaro ciyaarta.
Jose Mourinho ayaa qiray in aragtida aan caadi ahayn ay ka timid daalka, taasoo ah arrin ay u badan tahay in ay door weyn ka ciyaaraan hadda iyo dhamaadka xilli ciyaareedka.
Mourinho ayaa yiri BT Sport: "Marcos badanaa wuu daalanaa. Wuxuu ogyahay inuu jidhkiisa u baahan yahay wax. Wuxuu si fudud u waydiistay muuska. Xaaladda muuska ma ahan mid xiiso leh, waa inaan ixtiraamnaa xaalada jireed ee ciyaartoyda. "
Marcos Rojo Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xaqiiqooyinka looyaqaano -tattoo
Rojo ayaa hore ugu hadli kara Ingiriisi, sida uu qabo tattooskiisa, kaas oo akhriya 'Kibir' iyo 'ammaan'.
Waxa uu leeyahay faro badan oo kale, sidoo kale:
Marcos Rojo Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xaqiiqooyinka looyaqaano -Rabona Ka Heli
laakiin waxay ku doodayaan 'Rabona"Xaqiijinta Koobka Adduunka ma uusan kalsooni ku qabin cagta cagta. Mark Lawrenson waxuu soo jeedinayaa "inuu u eegi lahaa dame" haddii uu ku wareersanaa.
Hubinta FACT Waad ku mahadsantihiin akhrinta Marcos Rojo Childhood Story iyo xaqiiqooyinka taariikhda aan la sheegin. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan ku habboonayn qodobkan, fadlan ku qor faalladaada ama nala soo xiriir!.
Danny Welbeck Sheeko dhalinyaro sheeko xeel dheer